Must watch: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin taariikhda xorriyadda Soomaaliya, dowladdii kacaanka, wixii dhexmaray isaga iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal shirkii CARTA ka hor iyo fursadihii ay lumiyeen Somaliland iyo ugu dambeeyn wadahadalada Somalia iyo Somaliland. Arlaadi | Arlaadi
Home Blog Must watch: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin taariikhda xorriyadda Soomaaliya, dowladdii kacaanka, wixii dhexmaray isaga iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal shirkii CARTA ka hor iyo fursadihii ay lumiyeen Somaliland iyo ugu dambeeyn wadahadalada Somalia iyo Somaliland. Arlaadi
Must watch: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin taariikhda xorriyadda Soomaaliya, dowladdii kacaanka, wixii dhexmaray isaga iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal shirkii CARTA ka hor iyo fursadihii ay lumiyeen Somaliland iyo ugu dambeeyn wadahadalada Somalia iyo Somaliland. Arlaadi
Madaxweyne Cabdiqaasim ayaa wareeysigaan uu la yeeshay SNTV ku sheegay arrimo badan oo ay ka mid tahay in shirkii CARTA ka hor intii uusan tegin magaalada Jabuuti uusii maray Hargeysa oo uu kula kulmay Madaxweynihii Somaliland ee waqtigaas Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
Mudane Cabdiqaasim ayaa sheegay in ay usoo bandhigeen Egaal in uu ka qeybgalo shirka CARTA isagana loogu dooran doono Maadaxweyne oo aan lagula tartami doonin taasoo ay siyaasyiinta Koonfureed diyaar u yihiin iyo in sidoo kale magaalada Hargeysa ay noqoto Caasimada ku meel gaar ah.
Madaxweyne Cabdiqaasim ayaa sheegay in Mudane Egaal uusoo dhaweeyay talada ay usoo jeediyeen iyo in dib loo Midoobo, wuxuuna codsaday in waqti la siiyo oo uu kula soo tashado Madaxdii ay taladu kala dhaxeeyasay, kuwaas oo Mudane Egaal ku diiday in Koonfur dib loola Midoobo.
Waxaa halkaas ka muuqata in Mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Egaal uu ka arragti dheeraa raggii iyo siyaasiyiintii ay talo wadaaga ahaayeen oo ay la garan waayeen fikirkiisa, halkaasna ay Somaliland ku lumisay Fursad dahabi ah.
Madaxweyne Cabdiqaasim wuxuu weligiisba ahaa siyaasi cod kar ah oo si cad usoo bandhiga arragtidiisa oo aan la gaban. Waxaan si toos ah ula kulmay markii loo doortay Madaxweynaha oo uu booqasho ku yimid dalka Mareykanka, halkaas oo isaga iyo wafdi balaaran oo uu hoggaaminayay kaga qeybgaleen shirkii sandlaha ahaa ee Qaramada Middobay.
Madaxweyne Cabdiqaasim, RW Cali Khaliif Galayr iyo Mudane Wasiir Xasan Maxamed Nuur (Shaatigaduud) intii ay joogeen New York dhowr shir ayaan kala qeybgalay, iyada oo markii ugu dambeeysay aan si gaar ah ula shiray Cabdiqaasim iyo Shaatigaduud oo aan ka wada hadalay arrimo muhim ah oo taagnaa waqtigaas, waxayna labaduba markii dambe iga codsadeen inaan dalkii u raaco oo weliba ka mid noqdo xukuumada, taasoo aan markaas ka cudurdaartay codsadayna in la i siiyo waqti aan uga soo fakiro, kaddibna aan sidaas ku sagootiyay.